XOG: Cumar Filish oo soo saaray go’aan ay iskaga horyimaadeen RW Kheyre & Xildhibaano badan.
MUQDISHO(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in uu Gudoomiyaha gobalka Banaadir Ahna Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud (Filish) soo saaray labo maalin ka hor amar kuwajahan qeybaha maaliyadda ee gobalka Banaadir, dhaqdhaqaaqa ammaanka iyo qaabilaada xaafiiskiisa ee xubnaha kala duwan ee dawladda.
Gudoomiyaha gobalka Banaadir wuxuu ku amray dhammaan qeybaha Maaliyada ee maamulka in aan la bixin karin wax lacag ah oo aan aheyn mida ku jirta Miisaaniyada gobalka Banaadir ku leeyahay dawladda Soomaaliya, isagoo amray in la joojiyo lacago gunooyin sharafeed ahaan ugu qoran wasiiro, Xildhibaano iyo shaqsiyaad taageera dawladda Soomaaliya.
Cumar Filish ayaa sheegay in dhaqaalaha gobalka Banaadir isaga wax loogu qaban doono, balse aysan jiri doonin cid aan shaqeynin kana tirsaneyn Shaqaalaha gobalka Banaadir in ay lacag ka qaataan, taas oo uu sheegay in ay sharci darro tahay.
PUNTLANDTIMES, waxay ogaatay in lacago fara badan uu Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre horey ugu amray Duqii hore ee Muqdisho in uu siiyo xildhibaano, Wasiiro iyo saaxiibadiisa siyaasadda, kuwaas oo inta badan difaaca howlaha Xukuumaddu ay qabato, gaar ahaana kooxaha loo yaqaano FACEBOOK-ga in ay ka difaacaan dawladda.
Sidaas oo kale gudoomiyuhu wuxuu amray in aysan xaafiisyada bilaa balan ku imaan karin Wasiiradda iyo Xildhibaanada dawladda Soomaaliya, wuxuuna cadeeyey in ay lagama maarmaan tahay in shaqada bulshada loo wado ay tahay in waqti loo helo, masuuliyiintaasna ay waajib tahay in ay balan ku yimaadaan.
Amaradan waxay mar horeba abuureen hardan khilaaf oo soo kala dhexgalaya Gudoomiyaha gobalka Banaadir iyo Xaafiiska Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya, waxaana horey usoo bixi jiray xogo cadeynaya in Xildhibaanada taageersan Kheyre ay taageero maaliyadeed ka heli jireen khasnada gobalka Banaadir.